Madaxweynaha cusub ee Somalia oo fariin muhiim ah hawada u mariyey shacabka dibed baxaya!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Madaxweynaha cusub ee Somalia oo fariin muhiim ah hawada u mariyey shacabka dibed baxaya!!
Madaxweynaha cusub ee Somalia oo fariin muhiim ah hawada u mariyey shacabka dibed baxaya!!
Madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa goor dhow shacabka Soomaalida kala hadlay qalabka warbaahinta Qaranka isagoo fariin muhiim ah hawada u mariyey shacabka dabaaldegyada wada.
Farmaajo ayaa uga mahadceliyey shacabka magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka taageerada lixaadka leh ee ay ka muujiyeen doorashadiisa, wuxuuna Shacabka ugu baaqay iney guryahooda ku laabtaan sidoo kale waxa uuna Ciidanka Qalabka side ka codsayay inay joogiyaan Xabadaha Dabaal daga ee riyaan lana dhaqaaleeyo Rasaasta lagu xureyn lahaa Dalka Soomaaliya.
“Shacabka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibeda ku dhaqan wey ku mahadsan yihiin taageerada ay ku soo dhoweeyeen doorashada Madaxweynahooda cusub, waxaan ka codsanayaa iney guryahooda ku laabtaan waxaad rabteen waad hesheen, shaqo badan ayaa noo taalla, qaranka aan u wada shaqeyno” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo oo wareysi kooban siiyey Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed SNTV.
Dhinaca kale, Madaxweyne Farmaajo waxaa uu sheegay inuu dowladiisa ay la iman doonto qorshe aragti fog leh oo dalka lagu maamulo si ciriiriga jira looga baxo.
Waxaa mahad gaar ah u jeediyey, musharaxiintii kula tartamay doorashada, wuxuna xusay ineysan jirin cid guuleysatay iyo cid laga guuleystay dhamaantoodna ay ku mideysan yihiin Soomaalinimo iyo in Qaranka loo shaqeeyo.
Sidoo kale waxaa uu mahad celin gaar ah u diray guddoonka Baarlamanka, guddiga doorashada Madaxweynaha, wakiilada beesha caalamka, ciidamada amaanka qeybahooda kala duwan iyo intii kale oo gacanta ka geysatay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho.
Previous PostMadaxtooyada Somaliland oo war-saxaafadeed ka soo saartay doorashada madaxweyne Farmaajo!! Next PostGuddi ka shaqeynaya caleema saarka Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo goor dhow lagu dhawaaqayo!!